इतिहासमा लुकेको पर्यटन मकवानपुरगढी - Pradesh Today इतिहासमा लुकेको पर्यटन मकवानपुरगढी - Pradesh Today
नेपालीहरुमा घुमफिर गर्ने रुचि बिकास हुन थालेको छ । आजभोलि पर्यटनको बिट फराकिलो हुँदै गएको छ । पर्यटनहरु हिमाल, ताल र मठ मन्दिरमा मात्र पुग्दछन् भन्ने बुझाइलाई अब भने ऐतिहासिक कुरा खोज कार्य गर्ने पर्यटकहरु कोत, गढी र इतिहास जोडिएका सम्पदामा समेत पुग्न थालेका छन् । पर्यटन विकासको लागि यो खुशीको कुरा हो ।
प्रदेश नम्वर ३ को मकवानपुर आफैमा इतिहासको पाना हो । मल्लकालिन राजाहरुको पालादेखि नै भारत एवं तराइको भू–भागबाट काठमाडौँ उपत्यका जाने मुख्यद्वारको रुपमा रहेको मकवानपुर । राणकालीन अवस्थामा शिकार खेल्ने जंगलदेखि लिएर देश विदेशको यात्रामा हिडने भूगोल मकवानपुर ।
रोपवेदेखि लिएर सडक यातायातको सुरुवात गर्ने भूगोल पनि मकवानपुर नै मानिन्छ । मकवानपुरगढी करिब १३५ रोपनीमा फैलिएको क्षेत्रफल र संरचनाले नेपालमा भएका गढीहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो र फरक इतिहास बोकेको गढी हो । मकवानपुर कुनै बेला राजधानीको प्रवेशद्वार र राहदानी जारी गर्ने स्थानका रुपमा समेत परिचित थियो ।
मकवानपुरको ऐतिहासिक महङ्खवको बारेमा चर्चा नै गरेर सकिन्न । पहाडी भाग र भित्री मधेशको दुई उपत्यकाबाट बनेको मकवानपुरको भूगोल पर्यटकहरुले स्थलगत भ्रमण गर्ने हो भने बल्ल मकवानपुरको महङ्खवको बारेमा जान्न सकिन्छ ।
नेपाल एकीकरणको महङ्खवपूर्ण योगदान गरेको मकवानपुरगढीमा अब गाउँपालिकाले संग्राहलय निर्माण गर्ने भएको छ । हेटौंडा नजिकैको मकवानपुरगढीलाई पर्खालले घेरिएको छ । त्यसको बीचमा दरबार र गढीका भग्नावशेष छन् । प्रवेशद्वारको भित्र वंश गोपालको मन्दिर छ ।
अहिले मकवानपुरगढी पर्यटकको गन्तब्य बनेको छ । मकवानपुरगढीमा अहिले पर्यटकको चाप बढ्न थालेको छ । बिदाका दिन हेटौँडा बजारबाट रिफ्रेस हुन आन्तरिक पर्यटकहरुको भीडभाडको दृश्यले कुनै मेलाको झल्को दिन्छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले घोषणा गरेको मुलुकका सय पर्यटकीयस्थल मध्येमा मकवानपुरगढी पनि पर्दछ । मकवानपुरगढीकोे प्रवेशद्वारले चीनको ग्रेटवालको झल्को दिन्छ ।
पर्यटकलाई प्रवेशद्वारमा उभिएर फोटो र सेल्फी खिच्न पालो पाउननै हम्मेहम्मे पर्दछ । सडक कालोपत्रे र सरकारले पर्यटकीय गन्तव्य घोषणा गरेपछि मकवानपुरगढी घुमघाम गर्न जाने पर्यटकको संख्या बढ्न थालेको छ ।
इतिहासमा चासो राख्ने पर्यटकहरु मकवानपुरगढी पुग्ने बित्तिकै डायरी, कलम र क्यामेरा झोलाबाट निकाल्दै कलम चलाउन थाल्दछन् । पाल्पाली राजा मणिमुकुन्द सेनले आफ्नो विशाल राज्यलाई चार भागमा विभाजन गर्दा उनका कान्छा छोरा लोहाङ सेनको भागमा मकवानपुर परेको थियो ।
मकवानपुरको राजकाजका क्रममा मकवानपुरगढीको निर्माण १७५० सालतिर राजा तुला सेनले गरेका थिए । सेनवंशी राजाहरुको अन्त्यसमेत मकवानपुरगढीबाट भएको थियो ।
यो गढी समुद्रको सतहबाट करिब तीन हजार ६ सय फिट उचाइमा महाभारत पर्वतको दक्षिणतर्फ फैलिएको छ । मकवानपुरगढीमा मुख्य रुपमा दुईवटा गढी छुट्टाछुट्टै छन् ।
राजदरबार रहेको ठूलो गढीलाई मूल गढी भनिन्छ । त्यस्तै, सैनिक परेड खेल्ने र प्रशासनिक भवनसमेत रहेको गढी सानो गढीको नामले परिचित छ । मूलगढीको सुरक्षाका लागि चारैतर्फ करिब २५ फिट अग्लो पर्खाल लगाइएको छ ।
पर्खालको चौडाइ करिब चार फिट छ भने पर्खाल वरपर १० फिट गहिरो खाडलले गढीलाई थप सुरक्षा प्रदान गरेको छ । पूर्व–पश्चिम फैलिएको यस गढीमा राजपरिवार बस्ने दरबार जुगे दरबारका नामबाट परिचित छ ।
मकवानपुरगढी ऐतिहासिकस्थल भएकाले गाउँपालिकाको नाम पनि मकवानपुरगढी राखिएको छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिका–२ मा पर्ने गढी क्षेत्र हेटौँडाबाट १७ किमी पूर्वमा पर्दछ ।
मकवानपुरगढीमा त्यसबेला अपराधीलाई दण्ड दिन कारागारको स्वरुपमा बनाइएको खाल्डो देख्दा पर्यटक अचम्म मान्दछन् । सेन राजाहरुको समयमा ऐनकानुन मिच्नेलाई गहिरो खाडलमा हालेर यातना दिने र अपराध हेरी कसैलाई मार्ने समेत गरेको पाइन्छ ।
गढीमा ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक महङ्खवका वस्तु अध्ययनको लागि अझै पनि धेरै कुरा भेटिन्छ । मकवानपुरगढीमा पुराना दरबारसहित विभिन्न संरचना भग्नावशेषका रुपमा देख्न पाइन्छ ।
मकवानपुरगढीमा दरबार, विजय पार्क, सानो गढी र ढुंगेगढी, विजय स्मारक लगायत ऐतिहासिक स्थल रहेका छन् । मकवानपुरगढीको दक्षिणपूर्वमा सेनवंशीय राजासँग नाम जोडिएको जमिन रानीसेराको नामले परिचित छ ।
मकवानपुरे सेन राजा अत्यन्तै धनी शासकका रुपमा समेत परिचित थिए । सेनवंशीय शासनकालमा गाडिएको सुनैसुनको ढुकुटी अहिले पनि मकवानपुरगढीमा रहेको विश्वास गरिन्छ । नेपाल एकीकरण पूर्व मकवानपुर सेनवंशी राजाहरुको अधीनमा थियो । मकवानपुरगढी तिनै सेन राजाहरुको राजधानी थियो ।
गढी नजिकै पर्ने चिसापानीगढी अग्रेजसँगको युद्धमा सेना तैनाथ गरी युद्ध गरेको स्थान हो । आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सुसराली मकवानपुरगढी, सेनवंशीय राजा मणिमुकुन्द सेनको ऐतिहासिक जुगे दरबार र दरबारक्षेत्र अहिले पनि वीरगाथा सम्झाउने इतिहास पर्यटकहरुका लागि अध्यनको बिषय बन्दछ ।
इतिहास अनुसार वि.सं. १७९४ मा तत्कालीन सेनवंशीय राजा हेमकर्ण सेनकी छोरी इन्द्रकुमारी सेनसँग राजा पृथ्वीनारायण शाहले विवाह गरेका थिए । त्यसबेला मकवानपुर शक्तिशाली राज्यका रुपमा परिचित थियो ।
नेपाल एकीकरणको महत्वपूर्ण योगदान गरेको मकवानपुरगढीमा अब गाउँपालिकाले संग्राहलय निर्माण गर्ने भएको छ । हेटौंडा नजिकैको मकवानपुरगढीलाई पर्खालले घेरिएको छ । त्यसको बीचमा दरबार र गढीका भग्नावशेष छन् । प्रवेशद्वारको भित्र वंश गोपालको मन्दिर छ । अहिले मकवानपुरगढी पर्यटकको गन्तब्य बनेको छ । मकवानपुरगढीमा अहिले पर्यटकको चाप बढ्न थालेको छ । बिदाका दिन हेटौँडा बजारबाट रिफ्रेस हुन आन्तरिक पर्यटकहरुको भीडभाडको दृश्यले कुनै मेलाको झल्को दिन्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले विवाह गरेका २५ बर्षपछि अर्थात वि.सं. १८१९ साल भदौ ९ गते गोर्खाली सेनाले मकवानपुरलाई आफ्नो अधिनमा लिएको थियो । मकवानपुरगढी सेन वंशका राजाले १३औँ शताब्दीको शुरुतिर यहाँ शासन गरेका थिए ।
सेन वंशका प्रथम राजा मुकुन्द सेनदेखि अन्तिम राजा दिगबन्धन सेनसम्मका दश पुस्ताले करिब ३०० वर्षसम्म मकवानपुरगढीमा शासन गरेका थिए । इतिहास खोतल्ने हो भने एक समय मकवानपुर स्वतन्त्र राज्य थियो ।
त्यसको राजधानी मकवानपुरगढी । त्यहाँ इसं १२५८ तिरै राजा मुकुन्द सेनले गढी बनाउन लगाएका थिए । पछि मुकुन्द सेन द्वितीयका छोरा लोहाङ सेन मकवानपुरका राजा बने । मकवानपुरका अन्तिम राजा दिग्बन्धन सेन हुन् ।
उनलाई नेपाल एकीकरण नायक पृथ्वीनारायण शाहले पराजित गरेका थिए । आफ्ना सेना धमाधम मारिन थालेपछि राजा दिग्बन्धन आत्तिए । उनी भागेर हरिहरपुर गढीतर्फ लागे । गोर्खाली फौजले हरिहरपुर गढी पनि आक्रमण गरी जित्यो ।
मकवानपुरगढी मकवानपुरको मात्र नभएर नेपालकै ऐतिहासिक महङ्खवको धरोहर हो । इतिहासले के देखाउछ भने मकवानपुरगढीबाट नेपाली सेनाको इतिहास सुरु भएको छ । सेनवंशीय मकवानपुरका अन्तिम राजा दिग्बन्धन सेन मकवानपुरगढीअन्तर्गत रहेको हरिहरपुर गढीको लडाइँ हारेपछि बंगालका नवाब मिर कासिम अलीसँग सहयोग माग्न गएका थिए ।
नबाव अलीको सहयोगमा २ हजार लडाकु र एक हजार बन्दोबस्तीसहित ३ हजार फौज लिएर मकवानपुरगढीमा विसं १८१९ माघ १० गते आक्रमण गरेका थिए । मकवानपुरगढीमा रहेको नन्दु शाह नेतृत्वको फौज र पृथ्वीनारायण शाहले दहचोकबाट पठाएको वंशीराज पाण्डेको फौजसँग मिर कासिमका सेना पराजित भएका थिए ।
गुरगिन खाँको नेतृत्वमा आएको फौज होचो ठाउँ शिखरकटेरीतर्फ लागेको देखेर गोर्खाली फौजले अग्लो स्थानबाट ढुंगामुढा लडाई बन्दुक ताकेर माघ ९ गते रातिदेखि १० गतेसम्म शत्रु पक्षसँग लडेका थिए ।
मुगल सैनिकका १७ सय फौज हताहत भए । गोर्खाली सेनाको मनोबल उच्च भयो र बाँकीलाई लखेट्दै सीमाना कटाए । आजभन्दा २५६ बर्ष पहिले विदेशी सेनालाई हराएको खुशीयालीको स्मरणमा विजया उत्सव प्रत्येक माघ १० गते मकवानपुरगढी हुनेगर्दछ ।
गोर्खाली फौजले मिर कासिमको फौजलाई पराजित गरेपछि उनीहरुबाट खोसिएका आधुनिक हतियार र सैन्य उत्साहलाई संगठित गरेर पृथ्वीनारायण शाहले औपचारिक सैनिक संगठन निर्माण गरेका थिए ।
त्यो युद्धमा प्रयोग भएका केही हतियारहरु सेनासँग छ । गढी क्षेत्रमा मुकुन्द सेनकी रानीले रानी चौतारो बनाउन लगाएकी थिइन् । रानीले बनाएको चौतारो अझै पनि देख्न सकिन्छ ।
गढी दरबार आफ्नो कब्जामा आएपछि पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुरको सुपारेटारमा पुरानो गोरखगण स्थापना गरेका थिए । आजभोलि धेरै पर्यटक रमणीय प्राकृतिक वातावरण भएको ऐतिहासिक मकवानपुरगढी घुमघाम गर्न जान रुचाउँछन् ।
मकवानपुरगढी वरपर फलफूल र कृषिको लागि पर्याप्त उर्वरभूमि रहेको छ । मकवानपुरगढी थुप्रै प्राकृतिक मनोरम स्थलहरु रहेका छन् । पर्यटकहरुले आफ्नो भ्रमणको समय बढाउन सके मकवानपुरगढी बाहेक मकवानपुरका गाउँ र बस्तीको भ्रमण गर्ने हो भने धेरै कुराको अध्ययन हुन्छ ।
शहीद स्मारक, सिम भञ्ज्याङ र वरपरका पहाडी श्रृङ्खलाका डाँडाकाँडामा पाइने लालीगुराँस र सुनगाभाका प्राकृतिक संग्राहालयहरुले पर्यटकहरुलाई थप जिज्ञासा र अध्यन गराउँछ ।
अशोक सभ्राट नेपालको भ्रमणमा आउँदा, चिनो स्वरुप स्थापना गरिएको अशोक चैत्य, शिवालयहरु, पालुङग र बज्रबाराही क्षेत्रमा फेला पारिएका विभिन्न प्राचीन औजार, मूर्ति, गोपाल तथा महिषपाल वंशीहरुका सन्ततिका रुपमा रहेका गोपाली जातिको बस्ती पनि पर्यटकले अवलोकन गर्न सक्दछन् ।
चन्द्रगिरीको डाँडाको काखमा रहेको चित्लाङमा होमस्टे र पेईङ गेष्ट अवधारणामा पर्यटनहरुलाई सेवा दिन थालेका छन् । चित्लाङ मल्लकालीन इतिहास बोकेको ऐतिहासिक स्थल पनि हो ।
राणाकालीन समयमा चित्लाङ हुँदै मकवानपुरगढी भएर भिमफेदी आवत–जावत गर्ने प्रमुख मार्ग पनि थियो । मकवानपुरगढी पुग्ने पर्यटकहरु कुलेखानीको मानव निर्मित इन्द्र सरोवर जलाशय पुग्नै पर्ने हुन्छ ।
कुलेखानी पालुङ उपत्यकामा निर्माण गरिएको जलाशय मानव निर्मित जलाशय हो । इन्द्र सरोवर कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको जलाशय हेर्न र घुमघाम गर्न आजभोलि आन्तरिक पर्यटक मात्र होइन बाह्य पर्यटकहरु समेत जान थालेका छन ।
नेपालमा महङ्खवपूर्ण विद्युत आपूर्ति गर्दै आएको इन्द्र सरोवर नेपालको सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित जलाशय हो । यही सरोवरबाट निस्कन्छ कुलेखानी जलविद्युत् । प्रकृतिले बनाएका जलाशय र तालहरु बाहेक अहिलेसम्म यति ठूलो ताल नेपालमा मान्छेले बनाउन सकेका छैनन् ।
जलविद्युत आयोजनाका लागि निर्मित इन्द्र सरोवर रमणीय पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास भएको छ । विद्युत आयोजनाले विजुलीमात्रै दिँदैन, पर्यटकीय एवं प्राकृतिक सौन्दर्यलाई पनि यति सुन्दर बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा इन्द्र सरोवरमा पुगेपछि देख्न पाइन्छ ।
इन्द्र सरोवर जलाशय कुनै ठूला नदीको पानीलाई ड्याम बनाएर जलाशय भएको भने होइन । पालुङ उपत्यकामा बग्ने दामनबाट उदगम हुने पालुङ खोला, पाखेलबाट बग्दै आउने महालक्ष्मी खोला, टिस्टुङबाट बग्दै आउने तसर खोला र अन्य साना भलरना एवं खोल्साका पानीलाई ड्याम निर्माण गरी जलाशय भएको हो ।
विशेषगरी यो जलाशयमा आकाशे पानीलाई जम्मा गर्ने भएकोले जलाशयको नाम इन्द्र सरोवर रहन गएको हो ।जलाशयमा पानी जम्मा गर्न १ सय १४ मिटर अग्लो र १० मिटर चौडा रक फिल अर्थात् ढुंगा र माटो मिश्रित बाँधको ड्याम निर्माण भएको छ । इन्द्र सरोवर ७ किलोमिटर लामो र औसतमा करिब २ किलोमिटर चौडामा ताल बनेको छ ।
इन्द्र सरोवर घुमघाम गर्न पहिलो पटक पुग्ने जुनसुकै पर्यटक विशाल ताल हेर्दैमा दंग पर्दछ । तालको पूर्वी भेकमा बाँधिएको विशाल बाँध, पश्चिमतिर जलमग्न फैलिएको पानी, सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट, होटल र रेष्टुरेन्टहरुले धेरै पर्यटकहरुलाई पर्खिरहेका जस्ता देखिन्छन् ।
इन्द्र सरोवर तालको किनारमा होटल र रेष्टुरेन्टहरुले माछाका परिकार बनाएर राख्दछन् । इन्द्र सरोवर वरपर होटल र लजहरु रहेकाले खान बस्नको कुनै असुविधा छैन । अहिले पर्यटनको क्षेत्र विस्तार भएको छ ।
प्राकृतिक सौन्दर्य हेर्ने, समुद्रको किनारमा रमाउने, जलमा शिकार गर्ने, जंगलमा अनेक जीव जनावरको प्राकृतिक बसोबास र बसाइ हेर्ने, मानव निर्मित स्मरणीय र दर्शनीय स्थलहरुप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्ने, इतिहासबारे जानकारी लिने, साँस्कृतिक महङ्खवका सम्पदाहरुको अवलोकन गर्ने, तीर्थाटन गर्ने पर्यटनका क्षेत्र विकसित भएका छन् ।
जीवन र जगतलाई चिन्ने बुझ्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय घुमघाम अर्थात् पर्यटन हो । घुमघाम वा भ्रमण गर्नु मनोरञ्जन लिनु मात्र होइन । भ्रमणबाट धेरै किसिमका ज्ञानगुनका कुराहरु सिक्न र जान्न पाईन्छ । प्रकृति, समाज र प्रविधिको अवस्था, आवश्यकता र सम्भावनाहरुको पहिचान, भ्रमणबाटै लिन सकिन्छ । त्यसैले भ्रमणलाई खुल्ला विश्वविद्यालय पनि भन्ने गरिन्छ ।
हेटौंडाको बुद्धचोकबाट चौघोडा–चुच्चेखोला हुँदै १७ किमीको दूरी पार गरेपछि मकवानपुरगढी पुग्न सकिन्छ । हेटौंडाबाट हिँडेर जाँदा ४ घण्टा र बसमा ४५ मिनेट समय लाग्दछ ।
हेटौडा पुगेपछि गुम्बाडाँडामा ढुंगैढुंगाको मूर्ति र बगैंचा पनि पुग्दा राम्रो हुन्छ । हेटौंडा बजारमा रहेको सहिद स्मारक, कुस्माण्ड सरोवर लगायत सम्पदा घुम्न लायक छन् । दुई दिन छुट्याए सबैतिर घुम्न सकिन्छ ।